Steel Ọdịdị bolt Manufacturers | China Steel Ọdịdị bolt Suppliers, Factory
Wgbado ọkụ mbọ bụ fasteners na elu ike na rigidity. Wgbado ọkụ mbọ na-adị mkpụmkpụ maka mbọ isi ịgbado ọkụ mbọ maka arc stud ịgbado ọkụ. Ọnụ aha na-ekpo ọkụ bụ nke dayameta diameter 10 ~ Ф 25 mm na ngụkọta ogologo tupu ịgbado ọkụ bụ 40 ~ 300 mm. Solder studs nwere akara njirimara nke onye ọrụ nke ihe odide a na-akpọ convex n'elu elu nke isi. Solder studs na ọtụtụ-eji.